Iwu 3 nke Psychology na Ahịa na Ahịa | Martech Zone
Iwu 3 nke Psychology na Ahịa na Azụmaahịa
E nwere otu ìgwè ndị enyi m na ndị ọrụ ibe m na-adịbeghị anya enwetatụbeghị ọnụ iji chọpụta ihe bụ nsogbu na gị n'ụlọnga ụlọ ọrụ. Maka ọtụtụ akụkụ, ọ bụ na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma na-agbasi mgba ike ma na-ana obere ụgwọ. Agencieslọ ọrụ na-ere ọfụma na-akwụ ụgwọ karịa ma na-agba mbọ obere. Nke ahụ bụ echiche nzuzu, amaara m, mana hụ ya ugboro ugboro.
a ozi sitere na Salesforce Canada metụrụ na akparamaagwa nke ahịa na ahịa wee chee iwu 3 nwere ike inyere gị (na anyị) aka ịrụ ọrụ ka mma maka ire ahịa na ahịa:
Mmetụta uche na-ekere òkè dị ukwuu n'ịzụ mkpebi - ntụkwasị obi dị oke mkpa ka njirimara akara gị, ọnụnọ weebụ, ikike dị n'ịntanetị, nyocha na ọbụlagodi ọnụego gị (ọ dị ọnụ ala nwere ike ịpụta na ị gaghị atụkwasị obi) nwere ike imetụta mkpebi ịzụta.
Akpachapụ anya na-emetụta mkpebi ịzụta - egwu nke ọdịda, enweghị mgbakasị na mgbanwe, nke, na echiche ziri ezi ga-eme ka ndị mmadụ nwee njedebe. Ileba ọmụmụ bụ ezigbo ihe atụ nke a - na-eme ka ndị ahịa kachasị mma ị nwere.
Tingtọ na atụmanya gabigara ókè bụ isi ihe na-aga nke ọma - ịkwụwa aka ọtọ, ntọala ntọala, afọ ojuju ozugbo, ụkpụrụ ndị a na-akọrọ, na isi ihe dị mkpa bụ njigide na njigide nke ndị ahịa. O zughi ịkwụ ụgwọ opekempe maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ, ịkwesịrị ịnwe ohere ịmekwu!
Mmetụta uche na enweghị isi nwere ike imetụta mkpebi ịzụta anyị (ma anyị ghọtara ya ma ọ bụ na ọ bụghị). Akara aha, onyinye pụrụ iche, na afọ ojuju ozugbo nwere ike ịme azụmahịa ka ọ atọ ụtọ. Asatọ n'ime mkpebi iri anyị na-azụ bụ nke sitere na mmụọ. Ya mere, na naanị 10 pasent nke mkpebi ndị a maka ezi uche, ọ bụ naanị ihe ezi uche dị na ndị ahịa iji mara ihe gbasara mmụọ nke na-eme ka anyị banye n'otu ụdị ma ọ bụ ngwaahịa.
Tags: azu anchoringnkeenweghị mmasịmmetụta uchenhazi iheeme ihe n'eziokwuozugbo agụụnjikọtaenwere ikemgbaghaarụmụka na mmetụta ucheọnwụ aversionahịa infographicakparamaagwa ahiammetụta uche dị mmaPsychologyịzụta mkpebiịzụta mkpebiahịa infographicahịa kwaakparamaagwa ahiandị ahịandị ahịa canadaokekọrịta ụkpụrụka ọ dị na mbụụkpụrụwow ihe
5 Mejọọ nke nwere ike inweta Email gị na Spam nchekwa